Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Turkish Ozan Kabak Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe ndekọ akụkọ ndụ anyị nke Ozan Kabak na-agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna, ezinụlọ, enyi nwanyị/nwunye ga-abụ, ụdị ndụ ya, ndụ onwe ya, na ihe kwesịrị ekwesị.
Na nkenke, anyị na -enye gị akụkọ nkenke nke onye egwuregwu bọọlụ Turkey si Ankara. Lifebogger na -amalite akụkọ a site na mmalite ya, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji nye gị ụtọ ụdị okike nke Ozan Kabak Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ihe omuma nke Ozan Kabak. Site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge aha ya.
Ọ bụrụ na ị maghị, ọ bụ otu n'ime ikike na-enweghị nchebe kachasị na Europe. Ndị na-agba ọsọ na ndepụta nke ESPN soccer bụ ndị egwuregwu bọọlụ iri atọ na isii dị afọ iri abụọ na otu ma ọ bụ n'okpuru.
N'agbanyeghị otuto a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Ozan Kabak. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Ozan Kabak Nwatakiri Akụkọ nke:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha otutu - Ozwall. A mụrụ Ozan Muhammed Kabak na 25th nke March 2000 na nna ya, onye isi ụlọ mkpọrọ, na nne, onye nwe ụlọ, na Ankara, isi obodo Turkey.
Onye Turkish ọkachamara na-agba ọsọ bịara ụwa dị ka nwa nwoke na nwa nke abụọ, n'ime ụmụaka atọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya nke anyị sere ebe a.
Zute nne na nna Ozan Kabak. You nwere ike ịgwa ndị onye egwuregwu bọọlụ yiri?
Na-eto eto na Turkey:
Onye na-agbachitere etiti nwere afọ ndụ nwata ya na nwanne ya nwanyị nke okenye na nwanne nwoke nke obere aha ya bụ Emre.
N'ụzọ na -akpali mmasị, Emre nọkwa na football ma chọọ ịdị ka Ozan. Ọdịiche dị obere na -ekewa ma ụmụnne nwoke ma anyị na -akụ nzọ, na ọ na -esiri gị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti Ozan na Emre.
Ezinụlọ Ozan Kabak. Ya na nwanne ya nwanyị nke okenye na nwanne ya nwoke nke obere, Emre tolitere.
Nke abuo, n'ihe gbasara ito eto, ị ma na Ozwall nwere nwata na -awagharị awagharị? Ee!… N'eziokwu, O tolitere n'ọtụtụ obodo Turkey n'ihi ọdịdị ọrụ nna ya dị ka onye isi ụlọ mkpọrọ.
N'ime mmegharị ahụ, nwata ahụ zụlitere oke ịhụnanya maka ikiri na ịme egwuregwu bọọlụ.
N'oge ahụ, Ozan bụ onye na -akwado Liverpool maka na ọ hụrụ ụcha uhie ha. Arụsị bọọlụ ya abụọ- Stephen Gerrard na Luis Suarez - na-enye ya ọ joyụ mgbe niile na-ekiri egwuregwu ha.
Ozan Kabak Ezigbo Ezinụlọ:
Na -etolite, enwere ihe atọ doro anya na ndụ - ịdị umeala n'obi, obi ụtọ, ma ọ bụ nzụlite siri ike. Kabak nwere obi ụtọ nwata na nne na nna ya zụlitere ya n'ụzọ dị umeala n'obi.
Nzụlite ya na -enye ọ isụ nwere njikọ na eziokwu na nna ya, onye isi ụlọ mkpọrọ bara ọgaranya. Echefula, ọ sitere na ezinụlọ bụ ndị nwere mmasị na football.
Ozan Kabak Ezinaụlọ:
Maapụ Turkey a na -akọwa mmalite ezinụlọ Ozan Kabak.
Nwa afọ Ankara bụ nwa amaala Turkey nwere ezi obi. Nsonaazụ sitere na nyocha miri emi emere iji chọpụta usoro ezinụlọ ya na -egosi na Ozan nwere mgbọrọgwụ Asia na Europe.
Ọ dị mma, anyị ahụghị ihe ijuanya n'ihi na Turkey na -agbagha Eshia na Europe.
Ozan Kabak Mmụta:
Dị ka ọtụtụ ụmụaka nke Turkey, nne na nna ya mere ka ọ gụchaa ụlọ akwụkwọ praịmarị. Ịga ụlọ akwụkwọ sekọndrị bụ obere ihe ịma aka n'ihi mkpa ọ dị ịme ọtụtụ n'etiti bọọlụ na akwụkwọ ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, nwa anyị nwoke nwetara nzere ka ọ nwetara nzere nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị Science na Istanbul.
Ozan Kabak Biography - Akụkọ bọọlụ:
N'adịghị ka ozi ọma zuru oke na-eme mkparịta ụka na Internetntanetị, njem Ozwall na bọl amaliteghị na Galatasaray. Dịka eziokwu, o weere Silivrispor nke mbụ ya na egwuregwu ahụ dịka onye na-eti ihe.
Ozan Kabak gabigara usoro ike ọgwụgwụ n'oge ntorobịa ya. Ọ na -arụ ọrụ dị ukwuu gbasara agụmakwụkwọ na ịchọ ịbụ ndị egwuregwu.
Nwa anyị nwoke fọrọ nke nta ka ọ daa mbà n'ịghọ onye egwuregwu bọọlụ n'oge ndị a siri ike. Obi dị m ụtọ na ndị mụrụ ya na klọb kwadoro ya.
Mmalite Ndụ na Nlekọta Ọrụ:
Ka ọ na -erule oge Kabak dị afọ 12, ọ gara maka ule na Galatasaray wee nwee ihe ịga nke ọma na ya.
Otu a ka njem ya siri malite na klọb ebe ha hụrụ ka ọ tụgharịrị site na onye na -eti ihe ka ọ bụrụ onye na -agbachitere ya. N'inye ihe kpatara ngbanwe a, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ Nedim Yigit kwuru na:
Ọ nwere ụdị ọsọ ọ na-atụ ndị na-emegide ya ụjọ. N'ezie, oge ọ bụla Ozan nwetara bọl, ọ na-agba ọsọ yana yana na-echebe ya.
Ya mere, anyị kpebiri na ọ ga - abụ onye na - akwado ya n'ihi na ọ na - echebara bọọlụ anya ma na - ebuga ya nke ọma. "
Na mbu, enweghi obi uto Kabak na mgbanwe a. Otú ọ dị, ọ dị ngwa imeghari ya. Obi dị m ụtọ na ọ bilitere site na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-enweghị nsogbu.
N'oge ọ na -eto eto na klọb, nne na nna Ozan Kabak kwuru ka ha debanye aha nwa ha nwoke n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị nkeonwe. Ma ọ dịghị amasị ya.
N'ikpeazụ, ha kwetara ka ọ bụrụ oke na Galatasaray.
Ibi ndụ ya n'ime ebe ọzụzụ klọb nyere nwata ahụ nza ka ọ mụta ma kwalite ntozu ya.
N'oge na -adịghị anya ụlọ akwụkwọ sekọndrị ghọrọ ihe gara aga, Ozan jiri oge ya niile chee ihu na football - naanị ọrụ ya. Ka ọ na -erule oge ọ nwetara nsọpụrụ a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla maara na ọ ga -eme nke ọma na ndụ.
Ozan Kabak Carega nke Ọma Ọrụ.
N'ịbụ onye obodo ya họpụtara maka asọmpi UEFA European Under-2017 nke 17 nyere Ozan aha ama ama mba-n'agbanyeghị na ọ dị obere.
Nwatakịrị ahụ nyeere Turkey aka iru anọ nke asọmpi ahụ ebe ọ na-ata ubi ahụ megide talent dị ka Emile smith rowe, Obodo nke Man Phil Foden, Chelsea Callum Hodson Odoi, na nke Dortmund Jadon Sancho. N'ụzọ dị mwute, ndị wastali kpochapụrụ ndị otu ya.
Ozan Kabak Bio - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Ka ọ na -erule ngwụsị afọ agụmakwụkwọ ya, Kabak adịghị anya site n'inwe oke ahụ. N'ịzaghachi nke a, ndị na -ahụ maka klọb nyere ya ọrụ ịkụ mgbatị ahụ. Nke ahụ kwadebere ya maka anụ ahụ ọ ga -eche ihu na football.
Tupu gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ, kpakpando ahụ na-eto eto nwere njikọ n'etiti ndị okenye na-eduzi otu esi adị umeala n'obi. Ọzọkwa, ihe nzuzo maka ịmalite ịga nke ọma na football.
Mgbe Ozwall mechara bịanye aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Galatasaray, o doro anya na ọ nwere atụmanya nke ịbụ onye na-eto eto na-eto eto ọzọ.
Dị ka chi ga-enweta ya, ọ malitere ndụ agadi na ọrụ dị ọcha. Ozan mere ọkachamara ọkachamara ya site na inyere ndị otu ya aka na 2-0 Süper Lig merie ndị iro, Yeni Malatyaspor na 12 May 2018.
Na -eti ihe nhịahụ niile dị n'ụzọ ya, o meriri nrụgide niile site na ịgbanahụ ndị mwakpo na -emegide ya.
Ozan na -egwuri egwu megide ihe ndị na -amasị ya Emmanuel Adebayor na Beşiktaş kụrụ mmadụ - Anderson Talisca. Laa azụ n'oge ahụ, ndị nwoke a bụ ndị kacha agba bọọlụ na Turkey.
na Bafetimbi Gomis na ndị otu ya, na -enyere ha aka ị nweta ihe mgbaru ọsọ, Kabak rụrụ ọrụ ọ na -emebu n'inye nchekwa echebe. Otu ya, ndị otu ọdụm ya niile gara n'ihu merie aha 2017/18 Süper Lig a ma ama.
Naanị mmeri ahụ, ọ bịara doo anya na gọọmentị Turkey na onye mmekọ zuru oke Ağlar Söyüncü (kpakpando na -agbachitere ndị Turkey) abịala.
Maka ọ joyụ nke ezinụlọ Ozan Kabak na ndị maara nke ọma, otu n'ime ha nwetara oku ka ọ nọchite anya ndị otu mba Turkey.
Biography Ozan Kabak - Bilie na Akụkọ Ama:
Mgbe o nwetasịrị ihe dị ukwuu maka ọgbakọ ndị Turkey n'oge ọ dị obere, onye na -ahụ maka iwu na onye na -agbachitere nkà nwere ike lekwasị anya na Europe.
Kabak hapụrụ Galatasaray klọb nne na nna ya maka VfB Stuttgart. N'ebe ahụ, ọ rụrụ ezigbo ọrụ n'ịhụ na klọb ahụ ataghị ahụhụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ na VfB ka kpakpando ahụ na-ebili banye n'ime akwụkwọ ndekọ aha dị ka onye Turkey kacha nta na onye nke atọ Stuttgart ọkpụkpọ ga-agbata ugboro abụọ n'otu egwuregwu Bundesliga.
Site na ebumnuche ahụ, gụnyere ọtụtụ ihe ngosi dị egwu, ọ gara n'ihu merie Bundesliga Rookie nke Oge 2018/2019.
Ozan Kabak nwere obi ụtọ na VfB Stuttgart.
N'ịhụ na ọ na-eme ngwa ngwa bụrụ otu n'ime ndị na-agbachitere ngwa ngwa n'ụwa, Schalke jiri ohere. Ha gbalitere nkebi ntọhapụ ya.
Ị maara?… Schalke gara nke ọjọọ na njọ na -agbachitere ya tupu ọ bịarute na mgbe ọ nọ ebe ahụ, Kabak nyeere ha aka ijide ya - n'emeghị ka ha daa ọdịda.
Gwa eziokwu, Ozan Kabak siri ike dị ka okwute maka Royal Blues. N'afọ mbụ ya na Schalke, o guzobere onwe ya na ọtụtụ nnukwu arụmọrụ.
Anyị nwere vidiyo na-egosi ihe kpatara eji kpọọ ya-onye agbachitere na-eto eto kachasị elu na Europe.
Ngwa ngwa rue oge edere akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, ọ bịarutere England mgbe ọ gachara Liverpool mechara ego mgbazinye ego maka ya.
Ozan sonyere na -eso enweghị ike nke Rhy Williams iji belata agbachitere Red mgbe ọtụtụ mmerụ ahụ merụrụ ndị na -agbachitere ha.
You maara?Ị gaghị aga sọ gị ma nchaAbụ dị n'etiti ihe mere Ozan ji nwee mmasị siri ike ma kpebisie ike ịbanye Liverpool. Anyị chọpụtara n'oge mkparịta ụka mbụ ya na klọb. Lelee ya ebe a.
Obi abụọ adịghị ya, ịkwaga ebe a bụ nrọ maka Ozan ka ọ ga -apụta maka Reds nke ọ kwadoro kemgbe ọ bụ nwata.
Anyị mụtakwara na ọ na -ekpere arụsị Virgil van Dijk. Kedu otu ụzọ si mee ya na Anfield, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Ozan Kabak Dating?
Ozan Kabak nwere enyi nwanyị?
Site na ngbanwe ya na otu egwuregwu kachasị egwu n'ụwa, ọtụtụ nwere mmasị ịmara ụmụ nwanyị na ndụ Ozwall, ọkachasị enyi ya nwanyị.
Agbanyeghị, ọ dị ka Turk (n'oge a na -ede akụkọ ndụ ya) ka ga -ekpebi inwe enyi nwanyị ka ọ na -ekwukarị nwunye ya - opekata mpe ugbu a.
Ọ kpọtụghị aha nwanyị ọ bụla ma ọ nwere ike nọrọ n'alụghị di, ọbụlagodi na mbido ọrụ Liverpool ya.
Ozan Kabak Ndụ Ezinụlọ:
Ọ bụghị ihe nzuzo na ndị na -akwado ya hụrụ ya n'anya maka ihe ọ na -eme n'ọhịa egwuregwu. Agbanyeghị, enwere mmadụ ole na ole hụrụ ya n'anya karịa maka ịdị adị.
Ndị a bụ ezinụlọ Kabak. N'ebe a, Lifebogger ga -ewetara gị akụkọ gbasara nne na nna Ozan Kabak. Anyị ga -emekwa ụfọdụ eziokwu gbasara ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere Ozan Kabak Nna:
Papa ya rụrụ ọrụ n'ụlọ mkpọrọ ndị Turkey ebe o biliri elu nke ukwuu ka ọ bụrụ onye isi ụlọ mkpọrọ.
N'adịghị ka ọkwa ọ chọrọ, Onye isi ụlọ mkpọrọ a ma ama kwadoro nwa ya nwoke ka ọ gaa n'ihu na -ebi nrọ ezinụlọ Kabak.
Zute Nna Ozan Kabak. Ọ bụ onye a ma ama Director n'ụlọ mkpọrọ na Turkey.
N'oge ahụ, ọ na -esiri Ozan ike ịga n'ihu n'ọrụ ya na Galatasaray n'ihi na ebugharị nna ya na Tekirdağ, obodo dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Turkey. Nke a bụ isi ihe kpatara o jiri rịọ maka ụlọ Galatasaray.
Banyere Ozan Kabak Nne:
A na -akpọkarị ya 'Ihe nkwado'. Nne Ozan nyere aka n'ịkwọ nwa ya nwoke ka ọ na -azụ ọzụzụ n'oge nna ya na -arụ ọrụ na Prisons Turkey. Lee foto kacha mma anyị nwere ike ịhụ maka nne dị mpako nke ụmụ atọ.
Zute nne Ozan Kabak. Ka mara mma na afọ ya.
N'akwụkwọ ọzọ, anyị ga -achọpụta na nne Ozan Kabak bụ onye na -arụ ụlọ. Ọ na -enweta otuto maka ịkwado di ya n'ịkụnye ụmụ ya ụkpụrụ nke ọzụzụ na agụmakwụkwọ.
N'ikpeazụ, ọ na -eme ka ọ bụrụ ọrụ dịịrị ịga egwuregwu Kabak na inye ya nkwado omume mgbe ọ chọrọ ya.
Banyere Nwanna Ozan Kabak:
Aha ya bụ Emre Kabak na ọ dị ka nnukwu nwanne ya nwoke, Ozan. Nsonaazụ sitere na nyocha anyị nwere na Emre na -agbakwa bọọlụ mana ọ ka ga -enwe ihe ịga nke ọma ya.
Nke a bụ Emre (n'aka nri). Ọ bụ nwanne anya Ozan Kabak.
Banyere Nwanne Ozan Kabak:
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dị obere n'ọdịdị, njiri mara mma a bụ nwanne nwanyị nke okenye na nwa mbụ nke ezinụlọ Kabak. Ya na nwanne ya nwoke sere foto a n'oge emume ncheta ọmụmụ ya nke iri abụọ.
Nke a bụ Nwanne nwanyị Ozan Kabak. Ọ bụ ọkpara nke ezinụlọ ahụ.
Banyere ndị ikwu Ozan Kabak:
Ewezuga nne na nna ya na ụmụnne ya, enweghị ndekọ banyere ndụ ezinụlọ ezinụlọ Ozwall, ọkachasị dịka ọ gbasara nne na nna ya na nne na nna ya.
Ị ma ụmụnne nna ya ndị nwoke? Obi ga -adị anyị ụtọ na ị kesara anyị ozi ahụ.
Ọzọkwa, ọ ga -abụ ụdị ndị na -agụ akwụkwọ a ga -ewepụta ozi gbasara nwa nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ozan Kabak Ndụ Nke Onwe:
Ndị na-ede egwuregwu enweghị okwu ọ bụla mgbe ọ na-abịa ịkọwa ọdịnaya nke agwa etiti na-abụghị bọl. Enweghị nnukwu ọdịiche dị n'etiti onye ọ nọ n'ọhịa na n'egwuregwu egwuregwu.
Nghọta nke mmetụta uche nke Ozan, mmetụta ọmịiko, mmetụta ịkpa ọchị, ime enyi, ikwu okwu nro, na ụkpụrụ omume amaghị oke.
Onye na -agbachitere anaghị agọnahụ onwe ya ihe ụtọ nke ịpụ apụ mgbe ọ bụla o nwere ohere. Ọzọkwa, ya na ndị enyi ya na -emekọrịta ihe nke ukwuu ma na -etinye oge dị mma na ezinụlọ.
Nke ikpeazu ma ọ dịghị ihe ọzọ, Ozan Kabak bụ onye na -echefughị ​​ebe o si. N'agbanyeghị na ọ na -arụsi ọrụ ike, ọ ka na -achọta oge iji gaa ebe mere ya, onye egwuregwu bọọlụ na -aga nke ọma. Nke a bụ vidiyo na -akọwa ụdị onye ọ bụ.
Ndụ Ozan Kabak - Cgbọ ala na Net Worth:
Ị chọghị akwụkwọ ozi iji ghọta na Ozwall na -ebizi ụdị ndụ ọ rọrọ. Nkwupụta a na -abịa mgbe anyị chọpụtara - na ụgwọ ọnwa ya na Liverpool bụ nkwalite nke 2,025,916 XNUMX nke ọ na -eburu n'ụlọ na FC Schalke.
N'agbanyeghị nnukwu ego iji banye n'akpa uwe ya, onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara nke Turkey ka bụ ọgwụ mgbochi iji ụgbọ ala pụrụ iche.
A na -ese onyinyo Ozan ebe a na onye nnọchi anya ya n'ihe yiri ụgbọ ala mgbe atụnyere puku kwuru puku ọ na -eme kwa izu.
N'ikpeazụ, na ụdị ndụ ya, anyị na -eche na Kabak enweworị ọnụ ahịa ruru € 5m n'agbanyeghị na ọ dị obere.
Obi abụọ adịghị ya, ịnya ụgbọ ala dịpụrụ adịpụ na ibi n'ụlọ/ụlọ dị oke ọnụ kwesịrị ịbụ ikike nke kpakpando.
Eziokwu Banyere Ozan Kabak:
Iji kechie mpempe akwụkwọ a na akụkọ ndụ nwata nke Ozwall na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ obere amachaghị ma ọ bụ Eziokwu a na-akọwaghị banyere ya.
Eziokwu # 1 - Akụkọ na-atụgharị uche:
Onye ọ bụla maara na ịchụpụ mmiri mmiri, n'ike site n'ọnụ mmadụ gaa na onye ọzọ bụ ngosipụta nke iwe.
Maka nke a, anyị na -ekwu n'ikpeazụ - Ozan Kabak abụghị onye egwuregwu bọọlụ zuru oke ka ọtụtụ ga -ele ya anya.
Onye na -agbachitere ya mere mkparị mgbe ọ chụpụrụ onye iro ya n'ike. O mere nke a n'ihi nkụda mmụọ nke ịhụ ka otu ahụ meriri otu egwuregwu. Lelee vidiyo dị n'okpuru.
Eziokwu # 2 - Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ego ọ bụla
Kwa Afọ :: € 2,025,916
Ọnwa kwa: € 168,826
Kwa Izu: € 38,900
Kwa :bọchị: € 5,557
Kwa elekere: € 232
Nkeji nkeji: € 4
Sekọnd: € 0.06
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Ozan Kabak's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 3 - FIFA 2021 Fim:
Onye na-agbachitere ya, dị ka ibe ya Turk, Cengiz n'okpuru, nwere ezigbo ọkwa FIFA maka aha ya. Na 2020 Ozan bụ otu n'ime ụmụaka kacha mma na FIFA 20. Ngwa ngwa ngwa ruo 2021, ọ ka bụ nkwa kacha mma ka ị maa jijiji na ọnọdụ ọrụ.
Eziokwu # 4 - Ozan Kabak Okpukpe:
Anyị ekwesiri ịkọwa na Kabak bụ onye Alakụba raara onwe ya nye dịka onye obodo ya Hakan Çalhanoğlu? Obi abụọ adịghị ya, Alakụba bụ okpukpe kachasị na Turkey na onye na -agbachitere ya bụ otu n'ime ndị na -ekpe okpukpe.
Eziokwu # 5 - Forhụnanya Maka Van Dijk:
Kemgbe ọ bụ nwata, Ozan hụrụ Liverpool n'anya. Ọ tolitere na-amasị Steven Gerrard na Sami Hyppia. Ọbụna tupu ọ rọọ nrọ ịbanye Liverpool, Ozan lụrụ ọgụ ka ọ nwee uwe Virgil van Dijk No.4 Reds.
Otu ubochi ekeresimesi, Disemba 24th, 2018, Ozan mechara nweta uwe elu ahụ ọ rọrọ. Onye arụsị ya bụ Virgil van Dijk bịanyere aka na ya.
Onye bụbu onye otu egwuregwu Galatasaray, Omer Bayram-enyi Van van Dijk gosipụtara ya uwe Virgil bịanyere aka na ya.
Ringkekọrịta akụkọ n'azụ otú o si nweta uwe elu aka Virgil, Kabak kwuru otu oge, sị:
“Enwere m otu enyi na Galatasaray aha ya bụ Omer Bayram. ọ bụ enyi nwata Virgil van Dijk si Holland - arụsị m.
Ya mere, mụ na ya na-ekwu okwu, ekwuru m ihe dị mma banyere Virgil van Dijk. Agwara m ya na ọ dị ezigbo mma ma ọ masịrị m dị ka arụsị m.
Ozugbo ahụ, Omer gwara m na Virgil bụ enyi ya mgbe ọ bụ nwata. Enweghị m ike ikwere ya. Otu ụbọchị, mgbe ọ tụsịrị m ụjọ, site n'iwetara m uwe ndị na-agba ọsọ.
Omer kwuru na Ọ gwara Virgil maka m na Dutch mere ihe karịrị ịdegharị aha. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ. Etinye m jes a na mgbidi m n’ezinaụlọ m. Nke ahụ bụ akụkọ ahụ!
Anyị agafeela igosi gị onyonyo doro anya nke autogil van Dijk na Ozan. Dị ka a hụrụ n'okpuru, onye na-agbachitere Dutch abanyeghị naanị. Ọ na-emesapụ aka iji dee "Ije Ozan! Echiche kacha mma!"
Daalụ maka ịgụ akụkọ a na akụkọ nwata na akụkọ ndụ Ozan Kabak. Anyị nwere olile anya na njem na-atọ ụtọ nke onye na-azụ azụ si Turkey gaa Premier League kpaliri gị ikwere na nrọ ga-emezu.
Site na mbido, nrọ nwata Kabak bụ igwu egwu Liverpool - ọ naghị ekwukarị ka ya na arụsị ya nwee otu egwuregwu.
Ọ kwesịrị Lifebogger ito nne na nna onye agbachitere maka ezigbo nzụlite ya. N'ezie, ha rụrụ ezigbo ọrụ wee bụrụ ihe atụ nye ndị nne na nna nke egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ.
Na Lifebogger, anyị ji nganga na-ebuga Ndị egwuregwu bọọlụ Turkey ' Akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya na eziokwu na izi ezi.
Ọ bụrụ na ịhụ ihe ọ bụla adịghị mma, na Ozan Kabak's Bio, mee nke ọma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru. Iji nweta nchịkọta Memoir ya, jiri tebụl Wiki anyị.
Aha zuru ezu: Ozan Muhammed Kabak
aha otutu: Ozwall.
Age: 21 afọ na ọnwa 8.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị iteghete nke Machị 25.
Ebe amụrụ onye: Ankara, isi obodo Turkey.
Ụmụnne: Emre (nwanne nwoke nke obere), nwanne nwanyị nke okenye.
Ogo n'ogo: 6 Ugbo, 1 Inches.
Ogologo na cm: 186 UM.
Egwuregwu Ọnọdụ: Center azụ.
Net uru: € 5m